Wararka Maanta: Khamiis, Jun 28, 2012-Ciidamada DKMG ah oo Maanta howgallo ka sameeyay degmada Huriwaa kaddib Markii la weeraray Saldhigga iyo guriga guddoomiyaha
Dhallinyarada howlgalkan lagu soo qabqabtay oo tiradooda lagu sheegay labaatan ayaa waxaa lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin Al-shabaab ayna ka mid ahaayeen kuwii fuliyay weerarkii xalay dhacay.
"Saldhigga booliiska iyo gurigeyga ayaa xalay la weeraray, mana jirto cid wax ku noqotay weerarkaas," ayuu yiri guddoomiyaha degmada Huriwaa, Cumar Jacfaan oo la hadlay saxaafadda.
Guddoomiyuhu wuxuu sheegay in weerarkan uu ahaa mid ay Al-shabaab ku doonayso inay taageerayaasheeda ku tusto inay weli qaybo ka mid ah Muqdisho ku sugan yihiin, isagoo xusay inay degmada ka billowdeen howlgallo lagu sugayo ammaanka.
Howgallada laga sameeyay degmada Huriwaa ayaa intii uu socday waxaa xayirnaa isku socodka gaadiidka, dadka iyo ganacsiga, iyadoo degmadan ay ka mid tahay degmooyinkii ay ku dagaalameen ciidamada DKMG ah, kuwa AMISOM iyo xoogaggii Al-shabaab.
Goobjoogayaal ku sugan degmada ayaa sheegay in ciidamada dowladdu ay xaafado dhowr howgalka ka sameeyeen, iyagoo sheegay in dadka la qaybtay ay ahaayeen kuwo dhallinyaro ah, iyadoo dadka waaweyn lasii daynayay.